प्रधानमन्त्रीले बोलाए प्रमुख तीनदलका शीर्ष नेताको बैठक, के होला निर्णय ? – ToplineKhabar
प्रधानमन्त्रीले बोलाए प्रमुख तीनदलका शीर्ष नेताको बैठक, के होला निर्णय ?
काठमाडौं, मंसिर २८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले प्रमुख तीन दलको शीर्ष बैठक बोलाएका छन् । मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आइपुगेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आइपुगेका छैनन् । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यबस्थाकिा संसदमा पेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ । लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध हुँदा संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संसोधन प्रस्ताव रोकिएको छ ।
एमालेले संशोधनको विरुद्धमा तराई लगायतका पाँच नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सक्रिय रहेका हुन् । आजको बैठकमा तीन दलका शीर्ष नेताबीच समस्या समाधानको बाटो खोज्ने र नयाँ सहमति सहित निर्णय हुने बताइएको छ । सरकारले एमालेको चाहना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि संविधान संशोधन गरेर जाने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
आइतबार कांग्रेसका सभापति देउवाले एमालेका अध्यक्ष ओली सहित सुवास नेम्वाङसँग एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा कुराकानी गरेका थिए ।
बैठकमा संसोधन प्रस्ताव टुङ्गो लगाएर चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमति हुने बताइएको छ । एभरेष्ट दैनिकबाट
← मानवअधिकार आयोगको टोलीसँग बालकले भने – ममीलाई यही पोलमा सरले यसरी बाँध्नुभयो
स्थानीय चुनावबारे निर्वाचन आयोग पनि देउवाकै लाइनमा उभियो →
७ ट्रेड युनियनद्धारा आन्दोलनको घोषणा
राप्रपाको घोषणापत्र राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने (४० बुँदे संकल्पसहित)
November 7, 2017 प्रदीप भट्ट 0